महिलालाई यौ’न चाहना कतिबेला बढी हुन्छ ? यसो भन्छन महिला! – ईमेची डटकम
महिलालाई यौ’न चाहना कतिबेला बढी हुन्छ ? यसो भन्छन महिला!
महिलासँग कुन समय यौ नसम्बन्ध राख्दा उनीहरूलाई बढी आनन्द अनुभूति हुन्छ भन्नेबारे सोधिएको थियो । एउटा अध्ययनका अनुसार, महिनावारी पूरा भएको पाँचौंदेखि सातौं दिनसम्म । यो अवधिमा महिलालाई सहवासमा बढी आनन्द आउँछ । जर्मनीको युनिभर्सिटी अफ बेम्बर्गनका अनुसन्धाताहरू एक हजार युवा र युवतीमा सर्वेक्षणपछि उपयुक्त निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
यौ न विशेषज्ञहरूका अनुसार, महिनावारी पूरा भएको पाँचदेखि सात दिनसम्म यौ नको ‘मुड’ मा बढी हुन्छ । महिनावारी पूरा भएपछि यौ नका लागि उत्तेजित गर्ने हार्मोन सक्रिय हुन्छ । अनुसन्धाताहरूले त्यस अवधिमा युवतीहरूको मस्तिष्कको तरंगमा समेत निकै अध्ययन गरे । त्यस अनुसार, महिनावारीपछिको तीन दिनमा हुने सहवासले बढी रमाइलो अनुभूति दिन्छ ।
यस्तो किन हुन्छ, पाँचौंदेखि सातौं दिनसम्म गर्भाधारणको सम्भावना बढ्छ । यसैले यस अवधिमा सम्पर्कको तीव्र इच्छा जागृत हुन्छ । त्यो सर्वेक्षणमा युवतीहरूले महिनावारीपछिका तीन दिन पूर्ण यौ नानन्दको चाहना राख्ने गरेको बताए ।
यो पनि पढ्नुहोस : स्वस्थ बच्चा जन्माउन कस्तो हुनुपर्छ गर्भवतीको ‘डाइट’?
गर्भावस्थाको सुरुवाती महिना : गर्भावस्थाको पहिलो तीन महिनामा फोलिक एसिडयुक्त खाद्यपदार्थ सेवन गर्नुपर्छ । यसका साथै आइरनयुक्त पदार्थ बढी नै सेवन गर्नुपर्छ । यसले शिशुको राता रक्तकोष निर्माणमा मद्दत गर्छ । यो समयमा बिहान शरीर असामान्य महसुस हुने समस्या हुन्छ । यसको समाधानका लागि भिटामिन बी ६ लिनुपर्छ । क्याफिनयुक्त चिज सेवन कम गर्नुपर्छ । सामान्यतः डाक्टरहरुले पहिलो तीन महिनामा दिने डाइट चार्ट आवश्यक पोषक तत्वलाई ध्यानमा राखेर बनाउछन् ।
यी चिजबाट नडराउनुस् : गर्भावस्थाका दौरान कारणविना नै थकान महसुस हुन्छ । यसको मुख्य कारण हर्मोनमा आउने परिवर्तन नै हो । यस्तो अवस्थामा आरामको जरुरत हुन्छ । यसका अलावा पटक¬पटक पिसाब लाग्ने र बान्ता आउने समस्या पनि हुन्छ । जुन सामान्य मानिन्छ ।
कस्तो खाने ? : ब्रेकफास्टमा ब्राउन ब्रेड, एक कचौरा ओट्स, दाल, साबुदाना, दुध, दही, अण्डाको सेतो भाग, डाइजेस्टिभ बिस्कुट खान सकिन्छ । यस्तै, डिनरमा ओमेगा थ्रि फ्याटी एसिड, भिटामिन डी, बिटा क्यारोटिन, क्याल्सियमयुक्त खानाहरु डाइट चार्टमा राख्न सकिन्छ । ओमेगा थ्रि फ्याटी एसिडयुक्त खाद्यपदार्थ शिशुको मष्तिष्क विकासका लागि फाइदाजनक हुन्छ भने क्याल्सियम र भिटामिन डीले शिशुको दाँत र हड्डीको विकासमा भूमिका खेल्छन् । आइरन पुरै ९ महिना आवश्यक हुन्छ । आइरनयुक्त खाद्यपदार्थसँगै कफी या चिया सेवन गर्नुहुन्न । किनकि, चिया र कफीमा भएको टेनिन नामक तत्वले आइरन शरीरमा शोसिन दिँदैंन ।
तौलमा ध्यान दिनुपर्छ : गर्भावस्थाका दौरान १० देखि १३ किलो तौल बढ्नु पर्छ । हरेक तीन महिनामा एक देखि दुई किलो तौल बढ्नु उपयुक्त मानिन्छ । विज्ञहरु गर्भवती महिलाले दिनहुँ हिडडुल गर्ने र गहिरो श्वास लिने अभ्यास गर्ने सल्लाह दिन्छन् ।